Xaashiyaha Wargeysyada - Maalinta Maarso
Wargayska World March - Sannadka Cusub Gaarka ah
01 / 01 / 2020 by Antonio Gancedo
Bulletinkan "Sannadka Cusub Gaarka ah" waxaa looga dan leeyahay in lagu muujiyo waxqabadyada dhammaan boggaga lagu qabtay hal bog. Waa maxay sida ugu wanaagsan ee tan loo sameyn karo marka loo eego marin u siinta dhammaan joornaalada la daabacay. Waxaan soo bandhigi doonaa Wargeysyada la daabacay 2019, oo laga dalbaday kii ugu dambeeyay ilaa kan koowaad waxaana lagu soo koobay 5 qaybood oo midkiiba yahay saddex war. Waxaan u adeegnaa
Wargayska Maarso Adduunka - Number 15
31 / 12 / 2019 29 / 12 / 2019 by Antonio Gancedo
Waxaan imaaneynaa dhamaadka sanadka, ganacsadayaashu waxay joogaan Argentina. Halkaas, Beerta Daraasada iyo Milicsiga ee Punta de Vacas, oo ku taal Mendoza, hawluhu way xirmi doonaan Sannadkan. Waxaan ku bilownay joornaalkan dhacdadii ugu dambeysay sanadkii ay socod rogayaasha ku qabteen Punta de Vacas Study and Reflection Park, ee Punta
Wargayska Maarso Adduunka - Number 14
25 / 12 / 2019 24 / 12 / 2019 by Antonio Gancedo
Waxaan halkaan kuugu soo bandhignay qaar ka mid ah falalka ay ku shaqeeyaan Maareeyayaasha Kooxda Saldhigga Caalamiga ah inta ay ku sii wataan socdaalkooda Ameerika iyo sidoo kale qaar ka mid ah howlaha laga fuliyo waddamo badan. Dadka u ololeeya Maarso 2-da Maarso waxay la kulmaan ardayda iskuulka José Joquín Salas. Tan waxaa lagu dhawaaqay iyo
Wargayska Maarso Adduunka - Number 13
29 / 12 / 2019 24 / 12 / 2019 by Antonio Gancedo
Waxqabadyada kooxda Saldhigga ee Maarso 2aad ee Adduunka ayaa sii socota, qaaradda Mareykanka. Laga soo bilaabo El Salvador waxay tagtay Honduras, halkaasna waxay ka tagtay Cota Rica. Kadib wuxuu aaday Panama. Qaar ka mid ah waxqabadyada laga sameeyay meelo ka fog halka ay ku sugan yihiin Kooxda Kooxda ayaa la soo bandhigi doonaa. Marka la eego Maarso ee Bada, waan arki doonaa taas
Wargayska Maarso Adduunka - Number 12
21 / 11 / 2019 by Antonio Gancedo
Joornaalkaan, waxaan ku arki doonaa in Kooxda Saldhigga ee World 2 World March ee Nabadda iyo Xadgudubku ay yimaadeen Mareykanka. Meksiko, waxay dib u bilaabeen howlahooda. Waxaan sidoo kale arki doonnaa in howlo lagu fuliyo dhammaan qaybaha meeraha. Taasna, dhinaca badda dhexdeeda, ayaa socodku u dhexeeyaa inta u dhexeysa dhibaatooyinka iyo farxadda weyn. Waan arki doonnaa maalmo
Wargayska Maarso Adduunka - Number 11
16 / 11 / 2019 by Antonio Gancedo
Buug-yarahaan waxaan kaga hadli doonnaa wax qabadyadii Mar de Paz Maditerranean, laga soo bilaabo bilowgeedii ilaa imaatinka Barcelona halkaas oo uu ka dhacay kulan lagu qabtay Doomaha Nabadda ee Hibakushas, ​​badbaadayaasha reer Japan ee Hiroshima iyo Bambooyinka Nagasaki, Doonta Nabadda ee Barcelona. 27 ee
Wargayska Maarso Adduunka - Number 10
Maqaallada lagu muujiyey war-murtiyeedkan, Kooxda Saldhigga Adduunka ee Maarso waxay ka sii socotaa Afrika, waxay ku taal Senegal, hindisaha "Badda Mediterranean ee Nabadda" ayaa bilaabmi doonta, qaybaha kale ee meeraha wax walba way sii socdaan. Wargeyskan waxaan kula macaamili doonnaa howlaha Kooxda Base ee
Wargayska Maarso Adduunka - Number 9
02 / 11 / 2019 by Antonio Gancedo
Maarso 2aad ee Adduunka waxay ka soo duushay jasiiradaha Canary, ka dib markii ay soo caga dhigatay magaalada Nouakchott, waxay sii waday safarkii ay ku mareysay qaaradda Afrika. Wargeyskani wuxuu soo koobayaa waxqabadyadii laga qabtay Mauritania. Kooxda saldhigga ee bishii Maarso waxaa qaabiley Fatimetou Mint Abdel Malick, Madaxweynaha Gobolka Nouakchott. Markii dambe, waxaa jiray kulan lala yeeshay
Wargayska Maarso Adduunka - Number 8
30 / 10 / 2019 30 / 10 / 2019 by Antonio Gancedo
2 World Maarij wuxuu sii wadaa marinkiisa guud ahaan qaaradda Afrika, iyo dunida inteeda kale, bisha Maarso waxay la socotaa munaasabado badan. Joornaalkani wuxuu muujinayaa isbadalka ku yimid ficiladeena. Waxay ku shaqeysaa baarlamaannada, xuduudaha, marrar isku xiran, dadaallo gaar ah sida "Badda Badda Mediterranean ee
Wargayska Maarso Adduunka - Number 7
29 / 10 / 2019 29 / 10 / 2019 by Antonio Gancedo
Wargeyskan iyada oo Maarso 2aad ee Adduunka u soo boodayso Afrika, waxaan arki doonnaa marinkiisa Morocco, iyo duulimaadkeeda ka dib jasiiradaha Canary, howlaha ka socda "jasiiradaha nasiibka leh". Marinka loo maro Marooko Kadib markii xubno dhowr ah oo ka tirsan Kooxda Saldhigga Maarso ay ku shireen Tarifa, qaar Seville ka yimid iyo kuwo kale oo ka yimid Dekedda Santamaría, si wada jir ah ayey u dhigeen